Kooxda Tafatirka ▷➡️ VidaBytes | LifeBytes
LifeBytes waa mareegaha internetka AB. Mareegahaan waxaan ku ogeysiineynaa waxa ugu muhiimsan wararka, casharrada iyo tabaha ku saabsan aduunka tignoolajiyada, ciyaaraha iyo kombayutarada. Haddii aad tahay qof jecel tignoolajiyada, haddii dhiiggu xididadaada dhex maro farsamo markaa Vidabytes.com waa dhab ahaan waxa aad raadinayso.
Tan iyo markii la bilaabay 2008, VidaBytes ma joojin koritaanka maalinba maalinta ka dambeysa ilaa ay ka noqoto mid ka mid ah mareegaha ugu muhiimsan ee qaybta.
Kooxda tafatirka ee VidaBytes waxay ka kooban yihiin koox khubarada tignoolajiyada. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Xayeysinta iyo naqshadeeyaha garaafyada. Tababar joogto ah oo ku saabsan arrimaha barnaamijyada. Barashada wax kasta oo ku xeeran adduunka tignoolajiyada waa lama huraan maanta.
Markii ugu horeysay ee aan taabto kombuyuutar waxaan ahaa 18 jir. Kahor intaanan si dhib ah u isticmaalin inay ku ciyaaraan laakiin wixii markaas ka dambeeyay waxaan awooday inaan barto oo aan barto cilmiga kumbuyuutarka isticmaale ahaan. Waa run in aan dhowr jabiyay, laakiin taasi waxay iga dhigtay inaan ka baqo inaan tijaabiyo oo aan barto koodka, barnaamijyada iyo mowduucyada kale ee maanta muhiimka ah.
Xogta kooxda qoraalka guud ee VidaBytes.
Cusbooneysii Maanta waxa uu ahaa shabakad u heellan adduunka software-ka iyo nidaamyada ku soo biiray VidaBytes dhowr sano ka hor oo hadda dhammaan waxa ku jira lagu dhex daray mareegahan.
Farsamo yaqaan kombuyuutar oo bartay. Ardayga Nidaamyada Kombiyuutarka ayaa u heellan inuu ka caawiyo qof walba inuu tallaabo tallaabo u barto farsamada.
Resesenred wuxuu ahaa degel duug ah oo ku saabsan Shabakadaha iyo Kombiyuutarada kaas oo hadda qayb ka ah Vidabytes.com